“Operation Fandio” Toamasina: voasambotra ny “trondro madinika” | NewsMada
“Operation Fandio” Toamasina: voasambotra ny “trondro madinika”
Folo andro, ny alatsinainy teo, ny niatombohan’ny hetsika “Fandio”, ataon’ny zandarimariam-pirenena. Nitondra vokatra, tamin’ny mpanao gazety, avy hatrany, ny kolonely Ranaivoarisoa Theodule, komandin’ny vondron-tombim-paritra Atsinanana, tamin’ireo vokatra am-pelatanana. Voalohany, ny fahatrarana ireo telo lahy mpandrava, niaraka tamin’ny antsy be famonoana sy fandratran’ izy ireo izay lasibatra.
Faharoa kosa, ny fahatrarana renim-pianankaviana mpanaparitaka sy mampifoka rongony olona ao an-tranony, toy ireny trano fisotroan-toaka mahazatra hitantsika etsy
sy eroa ireny, tao Tanambao Verrerie. Tao amin’io toerana io indrindra no nahatrarana olona efatra. Nomenjanahary Zafisoa, 23 taona, kosa ny mpampiantrano azy ireo, mifoka rongony. Mbola nahatrarana fonosan-drongony anjatony tany amin-dramatoa.
Tamin’ iny faran’ny herinandro iny hatrany, tratran’ny fokonolona, tao Antanandava, ny andian’olona nitondra taolam-paty. Raha vao handeha hisava azy ireo ny fokonolona sady hiantso ny zandary, tafaporitsaka izy ireo. Taolam-paty milanja 50 kilao, nizara tamina
kitapo 25 kilao avy no tafajanona teo ka izao nalain’ny zandary izao. Misokatra ny fanadihadiana mikasika ny fasana niavian’ireo taolam-paty marobe ireo.